बैंकेश्‍वरबाट यमलोक हुँदै नेवारबहादुर र बाहुनबहादुर...- फिचर - कान्तिपुर समाचार
भाद्र १८, २०७८ रीना मोक्तान, तस्बिर : दिपेन्द्र रोक्का
'त्यो ९० मिनेटको कार्यक्रम'
त्यतिबेला मदनकृष्ण नेवारी समुदायमा चर्चित बनिसकेका थिए । उनी 'दबु प्याखँ'मा गीत गाउँथे, जोक सुनाउँथे । 'मदनकृष्णले हँसाउँछ, मीठो गीत गाउँछ' भन्ने तारिफ सुनेका थिए हरिवंशले । उनलाई पनि हास्यव्यंग्यमा रुची । हास्यव्यंग्य सिक्दै थिए त्यतिबेला । 'दबु प्याखँ'मा मौका पाइएला कि ? भन्दै उनी कार्यक्रम हेर्न जान्थे । 'दबु प्याखँ'मा मदनले जोक सुनाउँदा भीड हाँसिरहेको हुन्थ्यो । उनी नेवारी भाषा आधामात्र बुझ्थे । सबै हाँसेको देखेर उनलाई पनि व्यंग्यमै लाग्ने रहर जाग्यो ।
२०३४ मा प्रज्ञा भवनमा 'गाईजात्रा महोत्सव' हेर्न पुगेका थिए हरिवंश । मञ्चमा 'जागिरदारलाई बाँच्न झन् झन् गाह्रो भयो' भन्ने गीत गाएका थिए मदनकृष्णले । त्यतिबेला उनले निश्चय गरे, 'यस्तो कार्यक्रम म पनि गर्न सक्छु ।' अर्को वर्ष 'गाईजात्रा महोत्सव'मा भाग लिने अवसर जुर्‍यो । त्यतिबेला एउटै मञ्चमा मदनकृष्णले पनि प्रस्तुति दिए । त्यो वर्ष हरिवंशले मेडल जिते । दुईबीच सामान्य चिनाजानी भयो । गोरखापत्रमा नाम निस्कियो भने निकै चर्चा कमाइने बेला थियो त्यो । महोत्सवकै कारण गोरखापत्रमा हरिवंशको फोटो छापियो । लगातार २/३ वर्ष गाईजात्रामा एक्लैले व्यंग्य प्रस्तुत गरे ।
दुईले पहिलोपटक एउटै मञ्चमा 'बैंकेश्वर' शीर्षकमा व्यंग्य प्रस्तुत गरे । बैंकको पैसा सापटी लिएर भैंसी किन्ने तर, पैसा नतिर्ने विषयवस्तुमा व्यंग्य गरे । 'घरचाहिँ कहाँ नि ? बानेश्वर । ससुराली कहाँ नि ? ज्ञानेश्वर । मामाघर कहाँ नि ? त्रिपुरेश्वर' भन्ने संवादहरुले दर्शक हँसाएको सम्झना उनीहरुसँग अझै बाँकी छ ।
उक्त कार्यक्रमलगत्तै 'गाईजात्रा महोत्सव' आयो । 'यसपाली गाईजात्रामा दुईजना मिलेर व्यंग्य गरौं न' भन्ने दुवैबीच सहमति भयो । त्यसपछि दुईले 'यमलोक' भन्ने प्रहसन देखाए । यमलोकलाई क्यासेटमा रेकर्ड गराए । यमलोक ३० मिनेटको भयो । त्यसमा 'प्यारालाइसिस' भन्ने अर्को कार्यक्रम थपे । क्यासेट निकाल्दा नेपालमा यस्तो व्यंग्य हुन्छ भनेर कसैले कल्पना गरेका थिएनन् । क्यासेटले दर्शकमा अत्यधिक प्रभाव छोड्यो । १ लाख ५० हजार क्यासेट उनीहरुले बेचे । त्यही क्यासेटको आम्दानीले घर बनाए । त्यसपछि उनी दुई एक्लिन सकेनन् । दर्शकले उनीहरुलाई एक्ला-एक्लै देख्न रुचाएनन् । आफूहरु बाँधिनुमा उक्त क्यासेटको बिक्रीलाई पनि महत्वपूर्ण ठान्छन् महजोडी ।
'त्यो कार्यक्रम सफल नभएको भए हामी आफ्नो-आफ्नो बाटो लाग्थ्यौं होला । त्योबेला सफलताको उदाहरण बन्यौं हामी । दर्शकले हामीलाई एउटै सोच्न थाल्नुभयो । हामीलाई छुट्टिनुपर्ने आवश्यकता नै भएन,' हरिवंश सुनाउँछन् ।
त्यतिबेला उनी दुई ६ बजे अफिस पुगेर ९ बजेसम्म स्क्रिप्ट लेख्थे । ९ बजेपछि जागिरे हुन्थे । 'एकदम जोकर थियो हरिवंश । बोल्यो कि हँसाउने । मुख नै हाँसोउठ्दो । गोलो गोलो आँखा, सुकेको ज्यान । यसरी भुँडी लागेको पनि थिएन,' मदनले हरिको पेट देखाउँदै सुरुवाती दिनका हरिवंशलाई सम्झे ।
'भुँडी तपाईंले नै लगाइदिनुभएको हो । त्यतिबेला खाना नै पुग्दैन थियो कहाँबाट मोटाउनु,' मदनले पेटको प्रसंग जोड्ने बित्तिकै हरि बोली हाले । सँगै व्यंग्यको यात्रा थालेदेखि उनी दुईले मिहिनेत गर्न थाले । '२ जना भएपछि शक्ति बढ्यो । २ बुद्धिको सदुपयोग गर्न पायौं । काम गर्न सजिलो भयो । म थाक्ने बेलामा हरिवंशले घिसारेर लान्छ मलाई,' मदन सुनाउँछन् ।
त्यो बेला स्क्रिप्ट सरकारलाई बुझाउनुपर्थ्यो । सेन्सर कडा हुन्थ्यो । उनी दुईको कार्यक्रम भनेपछि त सीडीओले सोझै कार्यक्रम हेर्थे । व्यवस्थालाई व्यंग्य गर्न पाइँदैन थियो । उनी दुई सरकारलाई एउटा स्क्रिप्ट दिन्थे अर्को स्क्रिप्टमा प्रस्तुति दिन्थे । 'व्यंग्य गर्‍यो कि आउँथ्यो । भाग्नुपर्थ्यो त्यसैले हामी क्यासेटमा त्यसलाई रेकर्ड गरिहाल्थ्यौं । सरकार र हामीबीच टम एन्ड जेरी जस्तो लुकामारी चल्थ्यो,' हरि पूराना दिन सम्झँदै सुनाउँछन् ।
यो लामो यात्रामा ठाक्कठुक्क नपरेको होइन । तर उनी दुईले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै अगाडि बढे । 'तँ त साह्रै बिग्रिस नि बद्री' फिल्मतिर हरिवंश व्यस्त हुँदा 'मह' फुटेको चर्चा पनि चल्यो । तर मानिसहरुमा 'मह' फुट्ला भन्ने चिन्ताले नै त्यस्तो हल्ला चलेको उनी दुईको ठम्याई छ । 'ठाक्कठुक्क दिनका दिन पर्छ । हरिले एउटा भन्छ, म अर्को भन्छु । सकारात्मक कुराका लागि ठाक्कठुक्क परेको हो । नराम्रो कुरालाई हामीले वास्तै गरेनौं,' मदनले भने, 'मैले हरिवंशबाट राम्रो के पाएँ भनेर सोच्छु । सानो कुराहरु झिनामसिनोमा जान्छ । हामी पनि मानिस हौं । हामीबाट पनि गल्ती हुन्छ । आवेश हुन्छ, सबै गुण हामीसँग । सकारात्मक पक्षलाई हेर्ने आँखा छ हामीसँग, त्यो नै बलियो पक्ष हो ।'
'मह' उनी दुईले राखेका नाम होइनन् । एउटा विज्ञापन नाटकको उद्घोष गर्दा हास्य कलाकार राजाराम पौडेलले उनी दुईलाई यो नामले बोलाएका थिए । राजारामले पहिलोपटक उनी दुईलाई 'मह' भनेर सम्बोधन गर्दा मदनलाई त सुरुमा लागेको थियो, 'हामी यहीँ छौं, हाम्रै अगाडि अर्कैको नाम लिइदियो ।' तर राजारामले 'मह'को पूरा नाम सुनाएपछि दर्शक गललल हाँसे । सबैले ताली बजाए । उनी दुईलाई पनि त्यो नाम मनपर्‍यो । त्यसयता उनी दुईलाई मञ्चमा 'मह' भन्दै बोलाउन थाले । उनीहरुले आफ्नो कार्यालयको नाम नै 'मह संचार' राखेपछि यसले छुट्टै पहिचान पायो ।
'मह'ले यो यात्रामा राजनीतिक मात्र होइन हास्यव्यंग्यको परिवर्तनसमेत देख्यो । डबली (दबु प्याखँ) को व्यंग्यदेखि स्टेज, रेडियो, टेलिभिजन हुँदै डिजिटलसम्मको हास्यव्यंग्य देख्यो । टेलिफिल्म बनाउँदाको एउटा क्षण हरिवंश कहिल्यै बिर्सन सक्दैनन् । जब उनीहरुको टेलीफिल्म प्रसारणको समय हुन्थ्यो । हरिवंश डिल्लीबजारको गल्लीगल्ली विस्तारै बाइक लिएर जान्थे । त्यसरी दर्शकको हाँसोले उनीहरुलाई प्रतिक्रिया र उर्जा दिन्थ्यो ।
सरकारको विरुद्धमा बोल्न नपाउने बेलामा 'मह'ले राजनीतिक विषयवस्तुमा व्यंग्य बनायो । अहिलेका नयाँ पुस्ताले भने सोझै व्यंग्य गर्न व्यक्तिको नाम उच्चारण गरिरहेका हुन्छन् । हरिवंश नयाँ पुस्ताले घुमाएर व्यंग्य गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्,' पहिले-पहिले हामीले प्रतिकात्मक रुपमा व्यंग्य गर्नुपर्थ्यो । अहिले नामै तोकेरै भन्छन् । नाम चाहिँ नलिइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । हास्यव्यंग्य भनेको यस्तो होस् कि जसको विषयमा मैले सिम्बोलिक व्यंग्य गरें, त्यो व्यक्तिको पनि इज्जत नजाओस् । नामै तोकेर भनिदिँदा सजिलो माध्यम हो कि मिहिनेत गर्नु नपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ ।'
उनी अहिलेको व्यंग्य ५० वर्षपछि पनि बुझ्ने किसिमको हुनुपर्ने बताउँछन् । 'क्षणिक व्यंग्य नहोस् । हामी जन्मनुभन्दा अगाडिको गीत अहिले पनि कर्णप्रिय छ । यस्तो चिज बनोस् कि पछि आउने पुस्ताले त्योबाट सिकुन्, पच्छ्याउन् । त्यस्तो कलात्मक हास्यव्यंग्य सिर्जना गर्नपट्टि नयाँ पुस्ता लाग्नुपर्छ,' उनले भने, 'पहिले पहिलेका घाँसी, मेलापातका गीतमा दुईअर्थी शब्द प्रयोग हुन्थ्यो । हामीले त्यसलाई अनुशरण गरेनौं । हामी त्यसलाई ठ्याक्कै छोडिदियौं । अहिले पनि कतिले व्यंग्यमा त्यसको प्रयोग गर्छन् । क्षणिक चर्चाका लागि त्यस्तो शब्दको गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्ता कुरा दीगो हुँदैन ।'
'मित्रता विश्वास हो । अनुशासन हो । म मदन दाइलाई जहिले पनि तपाईं भनेर आदर गर्छु । उहाँले मलाई तिमी भनेर आदर गर्नुहुन्छ । उहाँले आदर गर्नुभएन भने म भाँडिहाल्छु । अनुसाशसनभित्र हिनामिना, थिचोमिचो हुँदैन,' हरिवंशले जवाफमा भने । उनको उत्तरमा थप्दै मदनकृष्णले भने, 'मित्रता भर हो । घर हो । डर हो ।'
प्रकाशित : भाद्र १८, २०७८ १७:३२